Maxaa Ka Taqaana Tuulada “daba-dhilifyada” Aqriso Warbixin Faafaahsan | Xaqiiqonews
Maxaa Ka Taqaana Tuulada “daba-dhilifyada” Aqriso Warbixin Faafaahsan
Meel fog oo ka baxsan Map-ka Israel, islamarkaana aan laheyn Adeeg dowladeed, ayaa halkaasi waxaa ay israel ku qarisaa “shaqaalaheedii Waqtigii madoobaa”.
Sida xaqiiqonews ay ka soo tarjuntay Websiteka Alkhaleejonline “Tuulada daba-dhilifyada” waa halka magac ee ay leedahay tuulo yar, oo ku dhax noolyihiin boqolaal qofood oo sirdoonka Israel la soo shaqeeyey gudaha falastiin, waxaana la dhihi karaa Tuuladani ayaaba noqotay “Abaal marintii ugu wanaagsaneyd ee Israel siiso jawaasiisteedii ,ka dib markii kaarka uu ka gubtay.
sanadkii 2005 markii ay Israel ka baxday Marin Ghaza ayey sameysantay tuuladan Yar,balse tuuldan iyo waxa ku dhax noo,l ayaa waxaa laga qariyey indhaha warbaahinta aduunka.
Si kastaba ha ahaate Chanelka “canne” oo ku baxa afka Cibraaniga ayaa dussay derbiga adaga islamarkaana banaan soo dhigay macluumaad heer sare ah oo ku saabsan tuuldan.
Tv-ga ayaa ka sheegeyey dhibaato heysato dadkan waxa uuna sheegay in dhibaato nololeed ay ka jirto tuulada, waxaana shaqaalihii hore ee israel ay ka cabanayaan Mushaar la,aan, tiiyoo ay u dheertahay in aysan ku noolaan karin halkii ay doonaan marka laga reebo in ay ku qasbanyihiin guryaha ka sameysan jiinkado bac weynayaal ah.
Hossam Al-Dajani oo ah khabiir ku tahkasusay arimaha Falastiin iyo Bariga dhexe waxa uu xaqiijinayaa in “daba-dhilfyada” marka la joogo Israel ay ka dhiganyihiin Warqad cad oo kale, oo marka laga bogto lagu tuuro sanduuqa qashinka, waana habdhaqanka Israel Ee siyaasadeed.
Dhankiisa Mohammed Shaheen oo ka faalooda arimaha Israel ayaa waxa uu yiri “daba-dhilifka waa warqad faa,ido leh ka hor intaa uu fashilmin, laakin hadii uu fashilmo , waxa uu noqonayaa Bilaa faa,ido waana la tuurayaa,waxaana uu ku qasbanyahay in uu ku hoos noolaado tuulada “dhaba-dhilifyada” si uu ugu dhuunto aargoosi kaga imaado falastiiniyiinta.”